Pep Guardiola, Mourinho Illaa Jurgen Klopp – Akhriso 10-ka Tababare Ee Ugu Mushaharka Badan Horyaalka Premier League - Gool24.Net
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, waxa ciyaarihiisa xamaasadda leh sii qurxiyey tababareyaasha ugu wanaagsan dunida waqtigan oo dhamaantood halkaas jooga.
Pep Guardiola oo 2016-kii Manchester City kala wareegay Manuel Pellegrini ayaa waxa uu ku guuleystay laba horyaal oo xidhiidh ah iyo koobabka maxalliga ah oo aan laga furfurin, laakiin Jose Mourinho oo ay kusoo xafiiltami jireen waddanka Spain ayaa isaguna dib ugu soo laabtay Ingiriiska sannad kaddib markii laga eryey Manchester United, waxaanu markan hoggaaminayaa naadiga Tottenham oo bishii hore caydhisayy Mouricio Pochettino.
Jurgen Klopp oo shaqo aan caadi ahayn sannadihii ugu dambeeyey ka qabtay Liverpool ayaa wacdaro ka dhigaya xili ciyaareedkan, waxaana uu hoggaanka ku hayaa siddeed dhibcood xili kala-badhkii ay ka hadhsan yihiin saddex kulan oo kaliya.
Saddexdan tababare oo hirdan adag ku jira, waxa kusoo biiray Brendan Rodgers oo markii uu ka tegay Liverpool u dhaqaaqay Scotland oo uu koobab badan ugu soo qaaday Celtic, laakiin hadda wata Leicester City oo la qaban kari la’yahay, kaalinta labaadna kala baxday Manchester City.
Haddaba sidee ayay tababareyaasha horyaaalka waddanka Ingiriisku u kala mushahar badan yihiin?
Waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa tobanka tababare ee mushaharka ugu badan ka qaata kooxaha Premier League, waxaana hoggaanka u haya Pep Guardiola oo ka sarreeya Jose Mourinho, Klopp iyo Brenden Rodgers oo iyaguna isku xiga.
Pep waxa uu toddobaadkii qaataa lacag dhan £385,000, taas oo marka sannad loo beddelo noqonaysa £20 milyan.
Jose Mourinho oo laba toddobaad ka hor noqday tababaraha Tottenham ayaa waxa usbuucii loo qoray inuu qaato £288,000, kuna jira kaalinta labaad. Waxay lacagtani noqonaysaa marka sannad loo beddelo £15 milyan.
Kaalinta saddexaad waxa soo galay Brendan Rodgers oo toddobaadkii u xaadira £192,000 oo sannadkii noqonaysa £10 milyan.
Jurgen Klopp iyo Ole Gunnar Solskjaer oo kaalinta afraad ku wada jira ayaa waxay toddobaadkii helaan mushahar dhan £145,000 sannadkiina noqonaysa £7.5 milyan.
Liiska tobanka tababare ee ugu mushaharka badan Premier League iyo lacagta ay qaataan: